Kutumira & Kudzosera Policy - Trivoshop
musha Kutumira & Refund Policy
Kutumira & Refund Policy
Vatengesi vanogona (kunyanya kune echinyakare maodha) inoda imwe yekugadzirisa nguva isati yatumirwa kwechinhu. Vatengi vachaziviswa mune aya mamiriro. Avhareji yekugadzirisa nguva kubva kune vanotengesa masosi pakati pe1 kusvika kumazuva mashanu. Zvichienderana nekuenda mukati meUS kana International, ndapota tendera pakati pe5 kusvika kumazuva gumi nemana kuti odha yako isvike (zvinoenderana nenzira yekutumira yakashandiswa) Chigadzirwa odha mukati meUS vane anokurumidza nguva mafuremu. Kana anopfuura mazuva makumi maviri apfuura ndapota email pa info@trivoshop.com kuti uongorore mamiriro eodha yako.
Zvimwe zvisiri izvo zvinogona kudzoka zvinhu:
Bhuku rine zviratidzo zvinoratidza kushandiswa
CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, kana vinyl rekodhi rakazarurwa
Kana iwe waita zvese izvi uye usati wagamuchira yako yekudzoserwa parizvino, ndapota taura nesu ku info@trivoshop.com.
Zvinhu chete zvezvinhu zvenguva dzose zvinogona kubhadharwa, zvinosuruvarisa kutengesa zvinhu hazvigone kubhadharwa.
Isu tinongotsiva zvinhu kana zvisina kukwana kana kukuvara. Kana iwe uchida kuchinjanisa icho chinhu chimwe chete, titumire email pa info@trivoshop.com uye tumira chinhu chako ku:
Kuti udzore chigadzirwa chako, unofanirwa kutumira chigadzirwa chako ku:
Mari yekudzoreredza inogona kunyorera zvichienderana nemamiriro ezvinhu echirairo kana chinhu chiri kudzimwa kana kudzorerwa.